China ngqo Engagement Shaft eqhutywa Centrifugal fan Nge Lagre Air flow mveliso kunye nabenzi | ILvran
Isiqinisekiso semveliso yokonga umbane ye-CQC
Uvavanyo lwe fan luhambelana nomgangatho kazwelonke we-GB19761-2009. Izixhobo zomqhubi zinokuqhuba ngokuqhubekayo iiyure ezingama-24 ngaphandle komonakalo, inobomi benkonzo ende, ukugcina amandla kunye nokusebenza ngokufanelekileyo, kwaye iyunithi yonke iphantsi koxinzelelo lwekhompyuter kunye nohlalutyo lobunzima ukuphucula ukomelela kwesakhiwo.
Umsebenzi olula wolondolozo
Ukusetyenziswa kwebhafu yeoyile evaliweyo itanki yeoyile ikhusela iibheringi kunye ne-shaft engundoqo kwirhasi etshabalalisayo, yongeza ubomi benkonzo, inciphisa ukubakhona kosilelo, imveliso yemodyuli, ukucaciswa okufanayo, iinxalenye ezigcweleyo kunye nezinto, kwaye inokusetyenziswa ngokukhawuleza nangokuncinci Iindleko, ukufakela ngokupheleleyo kunye nokugcinwa.
Nika iqela lenkonzo
Bonelela kwinkampani ukulinganisa ukusebenza, ukungcangcazela, kunye nokubonelela ngeengxelo zovavanyo ukunqanda ukusilela ngaphambi kokuba zenzeke, kunye nokuqinisekisa ukuba ifeni ibaleka phantsi kwezona meko zilungileyo. Inokulungelelaniswa neenkcukacha ezikhethekileyo zomthengi ukuqinisekisa ukuba ifeni ibaleka kwelona nqanaba liphezulu lokusebenza kakuhle.
Izinto eziluncedo:Ukuhanjiswa okuphezulu kokusebenza, ukhuseleko kunye nokuthembeka, kunye neemfuno ezichanekileyo zokufakwa kunye nokugcinwa. Kule mihla, uninzi lwabalandeli luqhutywa ngokusisiseko ngokudibanisa.
Ukungancedi:Nika ingqalelo engakumbi kwingxinano yayo ukunqanda iingxaki. Ukufuduswa kwesihlobo kunye nokungalingani kwe-rotor ziingxaki eziqhelekileyo ekudibaniseni ukuhanjiswa.
Egqithileyo Ukubola, ukuqhuma kunye nokuxhathisa okungagungqiyo Umsi wokukhupha iBlower Fan
Okulandelayo: Umzi mveliso wezinto ezenziwayo Shaft-coupling fan centrifugal
Ukubuyela umva okuThambileyo kwiFeni
Uhlobo lweBelt Drive lweCentrifugal Fan
Ifeni yeCentrifugal Blower
Uxinzelelo oluphezulu lweCentrifugal Fan
Umtsalane weCentrifugal fan
Umhlwa, ukuqhuma kunye nokumelana nokutshaya ...
I-fan ye-Lvyijing isebenzisa iikhonsepthi zoyilo, isebenzisa i-PROE, iinkqubo ze-CAD ezincedisayo kuyilo, kwaye isebenzisa iimveliso ezaziwa kwihlabathi liphela zentlaka, ifayibha yeglasi kunye nezinye izinto eziluhlaza ukuyenza ngokusebenza ngokuchanekileyo, ukusebenza okuzinzileyo, umgangatho ophezulu kunye nembonakalo entle. I-Lvyijing itshintshe indawo yesiko eliphakathi kunye noxinzelelo oluphantsi lwe-FRP yomlomo wesikwere kumlomo ojikelezayo, ocutha isiphithiphithi nengxolo yendawo yokuphuma yabalandeli kwaye iphucula indlela ...
Inlet engatshatanga yeCentrifugal Fan, Ukukhupha iFan, Fume Isitshisi, Umjelo weRadial Blade Centrifugal Fan, Uxinzelelo oluphezulu lweCentrifugal Fan, Ifeni yecandelo leCentrifugal,